Muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ka dhacdo doorasho aan waqtigeeda dhaafin | KEYDMEDIA ONLINE
Muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ka dhacdo doorasho aan waqtigeeda dhaafin
Madasha waxay sheegtay inay muhiim u aragto in laga fogaado xilligaan muddo xileedka madaxda DF uu gabaabsiga yahay wax kasta oo keeni kara khilaaf iyo kala fogaansho siyaasadeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kulanka hogaanka iyo xubnaha Madasha Xisbiyadda Qaran ku yeesheen aaladda ZOOM-ka, Khamiistii shalay ayaa lagu gorfeeyay arrimo muhiim ah, oo khuseeya masiirka dalka Soomaaliya, oo hadda ku jira dib usoo kabasho.
Qoraal Madasha soo saartey ayaa xusay in kulanka todobaad laha aad loo falanqeeyay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho aan waqtigeeda dhaafin, loo dhan yahay geeddi socodkeeda, ayna qayb ka yihiin daneeyeyaasha siyaasadda.
"Madasha waxay muhiim u aragtaa in laga fogaado xilligaan muddo xileedka madaxda DF uu gabaabsiga yahay wax kasta oo keeni kara khilaaf iyo kala fogaansho siyaasadeed. Shirku wuxuu bogaadiyay dadaalka ay Madaxda Madashu isugu soo dhaweynayso Guddoonka labada aqal ee BFS," ayaa lagu yiri qoraalka.
Soomaaliya ayaa hadda ku jirta marxalad kala guur ah, oo kusoo aaday khilaaf siyaasadeed oo mudo soo socday, kaasoo u dhaxeeya Farmaajo iyo Maamullada, oo heshiis ka gaari waayay is-maandhaafkooda salka ku haya awoodda iyo khayraadka sidii loo wadaagi lahaa.
Madasha Xisbiyada Qaran, oo ay hogaamiyaan Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaahab-dhaqanka Farmaajo ku tilmaantay mid aan la jaan-qaadi karin xaaladda dalka, maadaama uu doonayo inuu kursiga kusii fadhiyo wax ka badan mudo-xileedkiisa sharciga.
Muhiimadda ay leedahay in doorashadda dhacdo waqtigeeda ayaa ah in dalka ka badbaadayo fowdo iyo qalalaase cusub, oo lugaha la galo taasoo sababi karta dagaal inuu dhaco, maadaama mucaaradka qaar ku hanjabeen in derbiga la isku geyn doono, hadii la isku dayo in xukunka la dheeraysto.
0 Comments Topics: madasha xisbiyada qaran sheekh shariif villa soomaaliya xasan sheekh
Farmaajo wuxuu dalka geliyay xaalad hubanti la’aan ah
Warar 8 February 2021 8:51
Waxay musharixiinta ku baaqeen in la dhiso Golle Qaran oo dalka samatabixiya, loona gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay.
Shanta Qodob ee looga gudbi karo Doorasho dadban 2025
Warar 31 December 2020 15:55
Xasan Sheekh: Horey looma arag xaaladda Farmaajo dalka geliyay
Warar 31 December 2020 13:46
Xasan Sheekh oo ka digay qorsho uu Farmaajo damacsan yahay
Warar 24 December 2020 17:59